Xiritaanka ayaa kugu kalifay inaad ogaato in shaqadaada hada aysan aheyn mid waafaqsan himilooyinkaaga? Mise wuxuu kugu soo cusboonaysiiyay damacan, shaki kuma jiro inuu sanado badan dhinac dhigay, si aad naftaada u soo celiso? Sikastaba, waxaad tahay shaqaale maanta ku qanacsan inaad rabto inaad u weecato xirfadaha dijitaalka ah. Waa kuwan shanta talo ee aan ugu beddelayno dijitaalka.
Xulo xirfad xiise leh
Kahor intaadan madaxa-ilaa-madaxa ugu boodin dhanka dijitaalka, waxaa muhiim ah inaad beegsato xirfadda kaa buuxin doonta labadiinaba xirfad ahaan iyo shaqsi ahaanba. Haddii aad horeyba u heshay, ha ka waaban, isku mid, si aad u bilowdid " sahan ganacsi Si aad u hubiso in tani ay u dhigantaa fikraddaada ku saabsan oo aanad aad ugu habboonayn. Haddii, dhinaca kale, aad weli raadineyso "shaqada riyada", laba ikhtiyaar ayaa kuu furan:
La-talinta horumarinta xirfadeed (MOOBIILKA) (laba ilaa saddex saacadood oo dayactir ah). Nidaamkan taageerada ah - mid bilaash ah oo shakhsi ahaaneed - ayaa kugu hagi doona oo kuu oggolaan doona inaad dhisto mashruucaaga xirfadeed. The qiimeynta xirfadaha (24 saacadood oo dayactir ah dhowr bilood). Adeegani (lacagta la siiyay) wuxuu kuu oggolaanayaa inaad falanqeyso oo aad qiimeyso xirfadahaaga
5 talo oo ku saabsan dijitaalka July 10th, 2021Tranquillus
READ Hordhac makaanikada dareeraha
horeTababbarka MS PowerPoint 2016: Hesho aasaaska
socdaWarqad qoraal ah oo ku saabsan codsi kordhinta mushaharka guuleysta